Maty Tany Am-Ponja i Jorge Videla, Mpitondra Miaramila Tao Arzantina Teo Aloha · Global Voices teny Malagasy
Maty Tany Am-Ponja i Jorge Videla, Mpitondra Miaramila Tao Arzantina Teo Aloha
Voadika ny 18 Mey 2013 8:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, Français, 日本語, Italiano, বাংলা, Español
Nodimandry tamin'ny 17 mey 2013 teo amin'ny faha-83 taonany tao amin'ny efitrano namonjana azy i Jorge Rafael Videla, filohan'i Arzantina teo aloha.
Nitondra teo anelanelan'ny taona 1976 sy 1981, nandritra ny fitondrana jadona miaramila, fotoana nomarihan'ny fahafatesan'olona sy fanjavonan'olona [es] an'arivony i Videla.
Tamin'ny 1983 ny mpitondra jadona teo aloha no notsaraina sy nomelohina higadra mandra-pahafatiny noho ny heloka fandripahan'olona nataony. Tamin'ny 2010 i Videla no nodidiana [es] higadra mandra-pahafatiny noho ny fampijaliana sy fitifirana gadra politika 31, ary tamin'ny 2012 indray nodidiana higadra 50 taona noho ny fakàna an-keriny [es] zaza vao teraka nandritra ny fitondrana jadona.
Filazana Manjò [es] tao amin'ny BBC World no nandrenesana hoe: “Izy no iray amin'ny lehilahy mampiady hevitra sy ankahalaina indrindra any Arzantina, fa nandritra ny fotoana nitondrany dia manakaiky ny 30.000 ny olona maty na nanjavona araka ny filazan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona.”
Jose Alejandro Godoy avy ao amin'ny haba-tserasera Desde el Tercer Piso (Avy amin'ny Rihana fahatelo) no nanoratra [es] momba ny toe-draharaha nitranga nandritra ny nitondran'i Videla an'i Arzantina:
Fakana an-keriny hatrany ny zaza mbola kely, fampijaliana, fampiasana ny mondialy hanaovana propagandy (miampita arabe vitsivitsy miala ny kianjabe monja dia efa misy toera-pampijaliana), fampiharana amin'ny fomba tsy mety ny fanitsiana ara-toekarena, Arzanitiana an-jatony akaikin'ny sendikà lasa nitsoa-ponenana. Lova mahamenatra napetraky ny fitondrana jadona izany nanomboka taminy ary nifarana ny andro nanofinofisan'ny manamboninahitra arzantiniana sasantsasany nieritreretana fa ny fanombohana ny ady any amin'ny nosy Falklands no fomba tsara indrindra hanitarana ny fitondrana miaramila.
Hoy ny fehinteny nataony tamin'ny fahafatesan'i Videla:
Ankehitriny i Videla maty tao amin'ny fonja itambarambe tsy manana tombontsoa manokana. Voaheloka higadra mandra-pahafatiny. Halevina amin'ny fasana tsy tahaka ny maro tamin'izay novonoiny natsipy tany an-dranomasina avy eny amin'ny voromby izy. Nailiky ny fiaraha-monina arzantiniana izy ary nana-tantara ny fitsarana azy nametraka azy ho any amin'ny pejy matroka indrindra amin'ny tantaran'i Amerika Latina.
Etsy ankilany, LSO nametraka hafatra kely teo amin'ny blaoginy [es] izay ametrahany an'i Videla ho “manamboninahitra mendrika sy miaramila […] nahavita iraka nanome voninahitra azy.”
Toera-pampijalian'ny miaramila, izay navadika ho mozea fahatsiarovana ankehitriny – Tanànan'i Rosario. Saripikan'i Laura Schneider
Tamin'ny fampiasana teny fifankafantarana #MurioVidela [Maty i Videla] no nanehoan'ny Arzantiniana an'arivony ny fihetsepony tamin'ny fandrenesana ny vaovao, anisan'i zany ny mpisera @Cami-cotarelo [es]:
@Cami_Cotarelo: Tsy misy ny fihorakoraha-pifaliana ho amin'ny #MurioVidela, saingy efa ho 40 taona taty aoriana, olona mihoatra ny 30.000 no mandry am-piadanana
Nizara ny fahatsapana nananan'ny Arzanitiana maro ihany koa i Cecilia Saia (@Cecisaia) [es]:
@Cecisaia:: Nihena iray indray ny biby mahatsiravina miaina eto an-tany. Raha misy zavatra aorian'ny fahafatesana, enga anie izany hamerina aminy in'arivo ny zavatra rehetra nataony [hitody aminy in'arivony anie izay rehetra nataony] #muriovidela
Nanoratra toy izao tao amin'ny kaontiny Twitter ny nahazo ny loka Nobel ho amin'ny fandriampahalemana Adolfo Perez Esquivel (@PrensaPEsquivel) [es] :
@PrensaPEsquivel: #MurióVidela, lehilahy nandratra lalina ny firenena sy ny mahaolona. Tsy mbola vita ny fihodin'ny kodiarana; mbola mila mahalala bebe kokoa ny #verdad (marina) sy ny #justicia (rariny) izahay.
Infobae namoaka lahatsoratra Storify [es] ahitana fihetseha-po maro kokoa ao amin'ny Twitter.